China DAM3-160 MCCB Case olwenziweyo Circuit Breaker mveliso kunye nabenzi | IDaDa
Isishwankathelo se-DAM3-160 MCCB Case Circuit Breaker
I-voltage yokulinganisa yokulinganisa ye-Dada DAM3-160 yecala elibunjiweyo lesekethe elinokufikelela kwi-100V. Ezi zixhobo zombane zilungele ukuhanjiswa kwamandla kweesekethe ezinokutshintsha ngoku kwe-50-60Hz, umbane osebenzayo olinganisiweyo ukuya kuthi ga kwi-750V, kwaye ikalwe ukusebenza ngoku ukusuka kwi-10A ukuya kwi-100A. Ikhefu lesekethe lidlala indima ebalulekileyo ekusasazeni amandla kunye nokukhusela izixhobo zesekethe kunye namandla ekulayisheni kakhulu, kwiisekethi ezimfutshane, nakumonakalo wokungaphumeleli kwamandla. Zingasetyenziselwa kwiimoto zombane ukuqala okungapheliyo kunye nokukhuseleka kokukhusela kunye nokukhuselwa ekujikelezeni okufutshane kunye neemeko zokungabikho kwamandla.
Xa kuthelekiswa noluhlu lwe-DAM1, uthotho lwe-DAM3 luyilelwe ivolumu encinci, amandla okuphula aphezulu, enikezela ukonga amandla ongezelelweyo.
Iiparamitha zombane ze-DAM3-160 Case Circuit Breaker
Ikaliwe ngoku ubungakanani besakhelo Inm [A]
Ikaliwe ngoku [A]
Ikaliwe ombane yokusebenza
Ikaliwe impembelelo yokumelana namandla ombane we-Uimp [KV]
Ikaliwe amandla ombane Ui [V]
Iivolthi zovavanyo kumaza amashishini kwimizuzu eyi-1 [V]
Ikaliwe ekugqibeleni amandla okuqhekeka kwesekethe [KA]
Ubungakanani (AC) 50-60HZ 220 / 230V [KA]
Ubungakanani (AC) 50-60HZ 400 / 415V [KA]
Ubungakanani: (AC) 50-60HZ 690V [KA]
(DC) 250V-2 Izibonda kuthotho
(DC) Iipali ezingama-500V-2 kuthotho
(DC) 750V-4 Iipali kuthotho
(DC) 1000V-4 Iipali kuthotho
Ukulinganiswa kwenkonzo yokuhambahamba kwesekethe emfutshane, ii-Ics [KA]
Ubungakanani: (AC) 50-60HZ 220 / 230V [% Icu]
Ubungakanani: (AC) 50-60HZ 400 / 415V [% Icu]
Ubungakanani (AC) 50-60HZ 690V [% Icu]
Udidi lokusetyenziswa (EN 60947-2)
Iiparamitha zoMzimba ze-DAM3-160 Case Circuit Breaker
Inguqulelo esisiseko emiselweyo
3/4 Iipali W [mm]
I-27 (1P) / 54 (2P) / 76/1110
3/4 Iipayi H [mm]
3/4 Iipali L [mm]
Iibhola eziMiselweyo ze-3/4 [Kg]
Iplagi-ngaphakathi 3/4 yeePoyiki [Kg]
Zoba ii-3/4 iiPonti [Kg]
I-DAM3-160molded case breaker breaker ngokuzenzekelayo isika okwangoku xa okwangoku kudlula useto lokukhululwa. Ityala elibunjiweyo libhekisa kwisingxobo seplastiki esisetyenziswe njengesakhelo sefowuni ukufaka umqhubi kunye nesinyithi somhlaba
Phawula: Iinkcukacha zeMveliso ziqhotyoshelwe.
Izinto eziluncedo kwiSibonelelo sakho
Icwecwe (Indawo yokugcina)
Unbeatable when it comes to saving space: Kuluhlu lwabaphuli besekethe, i-DAM3 incinci kwiklasi yabo kwaye ke inokusebenzisa indawo yokuhambisa efanelekileyo ngokufanelekileyo, nokuba isetyenziselwa ukuhambisa amandla okanye njengokukhusela amandla angenayo kwizakhiwo zokuhlala okanye ezisebenzayo.
Ubungakanani beesakhelo eziyi-160 xa kuthelekiswa nolunye uphawu, zincinci kodwa zinamandla.
Ukuvula ngokuthe ngqo
Phantsi kwesihloko esithi "Amanyathelo okunciphisa umngcipheko kwimeko yokusilela",
Ukhuseleko lwe-IEC 60204-1 loomatshini-Izixhobo zombane zoMatshini zibandakanya ezi ngcebiso zilandelayo:
"- ukusetyenziswa kwezixhobo zokutshintsha ezinokuvula (okanye ngokuthe ngqo) ukusebenza kokuvula."
Umngcipheko wokuchukumisa amalungu aphilileyo uncitshisiwe ngokuyilwa Ezi zinto zinciphisa umngcipheko wokuchukumisa iindawo eziphilayo:
Akukho zikhonkwane zesinyithi zivelileyo ebusweni bangaphambili
Ukukhuselwa kwe-IP20 kwiitheminali
Ukukhuselwa kwe-IP30 kwindawo yokutshintsha
Ukuba ukutshintsha kwaphulwe ngengozi okanye ukusetyenziswa gwenxa, akukho nxalenye iphilayo ibhenciweyo
Akukho zixhobo ziphilayo zivelwayo xa kufanelekile izixhobo
Ukhuseleko lweMbonakalo (iwindow ebonisa)
Iimpawu zemibala zibonisa i-ON okanye i-OFF status. Izikhombisi zigutyungelwe ngokupheleleyo ukuba ikhefu lihamba, kwaye mnyama kuphela kombala obonakalayo.
Ukucima (O) Kuvuliwe (I)
Ukuqala ngokukhawuleza ngamafutha ashushu kunye nemagnethi yokukhubeka esele ilungisiwe.
Uthotho lwe-DAM3 kulula kakhulu ukusingatha kwaye luvumela ufakelo olukhawulezileyo xa usenza imisebenzi yakho.
Ukuhlawula kwi-35mm DIN Rail (ipatent ekhuselweyo)
Ifakelwa ngokulula ngasemva kwiimodeli ezi-2/3 zepali ze-DAM3-160 ukuvumela ukunyuka kwesiqwengana se-MCCB ukuya kwi-35mm DIN kaloliwe.
Ezenza ukuba zilungele ukunyuka ecaleni kwezixhobo zeemodyuli kwiibhodi zokuhambisa.
Ibhokisi yokuhambisa Ibhokisi yokuhambisa Ibhokisi yokuhambisa
Ukuthobela imigangatho ye-IEC / EN 60947-2 kunye nesidanga songcoliseko III (IEC / EN 60947) asiqinisekisi ngemathiriyeli kuphela kodwa kwanamaxabiso angabonakaliyo e-DAM3 series breaker series. Kunye noluhlu lwethu lwe-DAM3, sikwabonisa ukuthathela ingqalelo indalo esingqongileyo njengoko aba baphuli beesekethe bengqinelana nemiyalelo yeRoHS kwaye inokuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenziwe iphinde isetyenziselwe ukuphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde yenzeke ngayo. Okokugqibela kodwa kungaphelelanga apho - isinxibo esine-stylish se-DAM3 kuyilo olwahlukileyo lwe-CDADA lwenza ukuba ezi mveliso zibe nomtsalane kungekuphela kubuchwephesha kodwa nakwindawo yokujonga ubuhle.
Incinci kwaye inamandla
I-DAM3-160 ibonelela ngokhuseleko ngamanqanaba alinganisiweyo ukuya kuthi ga kwi-160 A kunye ne-36 kA yokuqhekeza amandla, ngaphandle kobunzima bokukhanya kunye nobubanzi obuncinci be-25 mm ngepali. Inkwenkwezi ngaphakathi kosapho lwekhefu, ifumaneka njengesixhobo se-2, 3 okanye 4-pole. Ukuqala ngokukhawuleza ngamafutha ashushu kunye nemagnethi yokukhubeka esele ilungisiwe yi-CDADA. Kwaye inobomi obude kakhulu ukuya kuthi ga kwi-10,000 imijikelezo yokusebenza koomatshini. Ukongeza, enkosi kwikhava yayo yesiphelo, i-DAM3 inenqanaba lokhuseleko le-IP 10.
Izinketho ezininzi zokunyusa
Ijongise ezantsi okanye ithe tyaba? Kuxhomekeke kuwe ukuba unqwenela ukuyinyusa njani i-DAM3 Kodwa ngaphandle kokuphakama kwendawo kunye necala olikhethileyo lokubonelela ngombane, iya kuhlala ikhusela umsebenzi opheleleyo.
Ukulungiswa kweCable: I-Cable lug kunye nebhokisi yesiphelo
Intambo eqinisekisiweyo enentambo ene-M8 nezikhonkwane kunye netekhnoloji yetheminali yebhokisi yokufaka ngokukhawuleza nangokulula: zombini zibandakanyiwe kuluhlu oluqhelekileyo lweemveliso.
Izisombululo zenziwe ukulinganisa
Ukukhubeka kude, ukubonisa imeko yokutshintsha okanye ukukhutshwa kwamandla ombane kwimeko yezokhuseleko izicelo ezifanelekileyo konke oku kulula ukulawula i-DAM3.Ngombulelo kuluhlu olubanzi lwezinto zokusebenza, i-DAM3 ayizukuba ngumdlalo ofanelekileyo kwizicelo ezisemgangathweni, kodwa isisombululo esifanelekileyo sokujongana neemfuno ezizodwa.
Xa uceliwe i-DAM3 ikwakhona ngesiphatho esijikelezayo (sokufaka ngokuthe ngqo okanye ukudibanisa umnyango).
Iimpawu / iiNqaku
Ikaliwe ngoku 16A upto160A
Ukwaphula amandla: 12, 18, 25, 36 kA
Ukulungiswa kwentambo: I-Cable lug M8 okanye i-Box Terminal
Iipali ezikhoyo: 2pole, 3pole, 4poles
Ilinganisiwe iVoltage: 400 / 415V, 50 / 60Hz
Isikhundla se-3-Indawo: I-Off-Trip-ON
Ukubonelela ngombane: Umgca okanye icala elilayishayo
Olona qhakamshelwano luphambili lwe-DAM3-160 ebunjiweyo yesekethe yesekethe kukunyanzeliswa ngesandla okanye ukuvalwa kombane. Emva koqhakamshelwano oluphambili luvaliwe, indlela yokukhutshwa simahla itshixa oyena mntu uqhagamshelwe kwindawo yokuvala. Ikhoyili yohambo olugqithisileyo kunye ne-thermal element edityaniswe kuthotho kunye nesekethe ephambili. Ikhoyili yohambo lwangaphantsi kunye nonikezelo lwamandla zidityaniswe ngokufanayo.
Ubungakanani be-DAM3-160 yecala elibunjiweyo lesekethe
Zonke iimveliso ezinikezelweyo kule khathalogu zinesiqinisekiso ngokuchasene nokusilela kwizixhobo kunye nokusebenza kwazo kangangexesha leenyanga ezili-12 ukusukela kumhla wokuthengwa kwawo njengomgangatho.
I-CDADA ine-ISO 9001 yokuvunywa yokwenziwa, ukuthengiswa kunye nokusasazwa kwazo zonke iimveliso ezibonisiweyo kule khathalogu.
Inkxaso yobuGcisa isimahla
Sinikezela ngenkxaso yezobugcisa yasimahla kunye nesoftware yesicelo kubo bonke abathengi. Oku kunokuhluka ekukhetheni imveliso yesicelo esingaqhelekanga ukuya kuphononongo lokhuselo.
Egqithileyo I-DAM1 Series UkuSebenza ngokuBanzi ngokuSebenzayo ukuSebenza kweMeko yeSekethe yoBume (Uhlobo oluLungisiweyo)
Okulandelayo: I-DAM3-250 MCCB Icandelo leMeko eliBunjiweyo leSekethe
ubungakanani be-compact mccb
din kaloliwe mccb
encinci encinci mccb